Huwori, rusarura, utsotsi… zvingadzivirirwe sei muhutungamiri hwenzvimbo?
Yakatumirwa ne Tranquillus | Jan 10, 2022 | Pamusoro pewebhu
Chero mumiririri wedunhu rimwe zuva angangosangana nenjodzi yehuwori. Api kana api ari basa rake, angazviwana amene ari muchinetso apo anonangana nekokero yakaitwa kwaari kana kuti nemhaka yokuti iye anotora rutivi muchisarudzo chinobatanidza imwe yehama dzake dzokunyama kana kuti kunyange nemhaka yokuti iye anofanira kupa zano mukurusa akasarudzwa pamusoro pechisarudzo chakaoma.
Vakuru venzvimbo vanoshandisa masimba akawanda uye vari kusangana nevateereri vakasiyana-siyana: makambani, masangano, vashandisi, dzimwe nharaunda, manejimendi, nezvimwewo. Vanotora chikamu chakakosha chekutenga neruzhinji muFrance. Vanoita mitemo ine mhedzisiro yakanangana nehupenyu hwevagari uye pamamiriro ehupfumi enzvimbo.
Nekuda kwezvikonzero zvakasiyana izvi, ivo zvakare vanooneswa kune njodzi dzekutyora kwehunyanzvi.
Yakagadzirwa neCNFPT neFrench Anti-Corruption Agency, kosi iyi yepamhepo inobata nekutyorwa kwese kwehuori: huwori, rusarura, kuba mari yeruzhinji, kubiridzira, kutora zvido zvisiri pamutemo kana kupesvedzera kutengesa. Inodonongodza mamiriro ezvinhu anokonzeresa njodzi idzi mukutonga kweveruzhinji. Inopa matanho anogona kutorwa nevakuru venzvimbo kuti vatarisire nekudzivirira njodzi idzi. Inosanganisirawo mamodule ekuzivisa kune vamiririri venzvimbo. Inovapa kiyi dzokuita nenzira yakakodzera kana vakasvikwa kana kuti vakapupurirwa. Inobva pamakona ekongiri.
Inowanikwa pasina hunyanzvi hwekuita zvinodikanwa, kosi iyi inobatsirawo kubva mukunzwisisa kwevazhinji vanobatana nemasangano (French Anti-Corruption Agency, High Authority yekujekesa kweHupenyu hweveruzhinji, Defender of Rights, National Financial Prosecutor's Office, European Commission, nezvimwewo), nharaunda. vakuru nevatsvakurudzi. Inodaidzawo chiitiko chezvapupu zvikuru.
VERENGA Taurirana munzvimbo ine tsika dzakasiyana
Huwori, rusarura, utsotsi… zvingadzivirirwe sei muhutungamiri hwenzvimbo? January 17th, 2022Tranquillus
zvinoteveraKuita munharaunda yehutano nekugara zvakanaka kwevanhu
Iyo France Cybersecurity Challenge (FCSC) yadzoka: timu yeFrance iri kutsvaga vamiriri vayo!
Iwe une vateveri vazhinji pa Instagram otomatiki?
Nheyo dze manejimendi manejimendi: Matimu
Entrepreneurship in the circular economy